एम्बुलेन्स चालकनै स्वाब संकलक – Health Post Nepal
एम्बुलेन्स चालकनै स्वाब संकलक
२०७७ साउन ३२ गते १४:३०
आइतबार दैलेखको नारायण नगरपालिका–८ तर्तांगस्थित आइसोलेसनमा स्वाब संकलन गरियो। जम्मा चारवटा स्वाव संकलन भएकोमा दुईवटा होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमणका सक्रिय बिरामीको स्वाब लिइएको थियो।
उक्त आइसोलेसन सेन्टरमा आइतबार बिहान जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखका एम्बुलेन्स चालक अर्जुन शाही आफैले स्वाब संकलन गरे। दैलेखमा एम्बुलेन्स चालकद्वारा स्वाव संकलन गर्ने गरिएको छ। जिल्लामा रहेका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका सक्रिय बिरामी तथा होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरुको स्वाब एम्बुलेन्स चालकहरु आफैंले संकलन गर्छन्।
आइसोलेसनमा सेन्टरमा रहेका एक जनाले भने, ‘उनी एम्बुलेन्स चालक हुन्। यसअघि पनि स्वाव संकलन गरेको हामीले देखेका छौं। सम्बन्धित स्वास्थ्यका कर्मचारीबाहेकले संकलन गरेको स्वाबमा हामी कसरी विश्वास गर्नु?’
कानुनअनुसार स्वाब संकलनका लागि चालकको प्रयोग हुनु गैरकानुनी हो। न उनीहरु यसबारे जानकार नै छन्। तर, दैलेखको नारायण नगरपालिकामा रहेका आइसोलेन सेन्टरहरुमा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि एम्बुलेन्स चालक आफैंले स्वाब संकलन गर्दा कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
यता दैलेख अस्पतालका फोकल पर्सन तथा खोप अधिकृत थिरप्रसाद रेग्मीले एम्बुलेन्स चालकले स्वाब संकलन गरेको स्वीकारे। उनले भने, ‘म पनि संकलन गर्छु भनेर एक जनाको स्वाव संकलन गरेको भन्ने सुनेको छु। तर, एम्बुलेन्स चालकबाट नियमित रुपमा स्वाब संकलन भइरहेको भने सत्यता चाँही होइन।’
उक्त आइसोलेसनमा डा. प्रशन्न नेपालसहितको स्वास्थ्यकर्मीहरु खटेका छन्। ‘डाक्टर नै उपस्थित आइसोलेसनमा एम्बुलेन्स चालकले स्वाब संकलन किन गरेको ?’, भन्ने आयोमेलको प्रश्नमा डा. नेपालले भने, ‘जिल्लामा ल्याबका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालकलगायतलाई तालिम दिइएको थियो। भविष्यमा आउनसक्ने जोखिम नियन्त्रणका लागि केही हदसम उहाँहरुलाई सिकाइको छ। त्यही तालिमका आधारमा एम्बुलेन्स चालकले पनि स्वाब संकलन गर्न सकेका हुन्।’
डा. नेपालकाककअनुसार यसअघि दैलेखका विभिन्न स्थानमा रहेका आइसोलेसन सेन्टरहरुमा स्वास्थ्य प्रयोगशालालगायतका सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएका समयमा तालिमप्राप्त एम्बुलेन्स चालकलेसमेत स्वाव संकलन गर्ने गरेका छन्।
उनले भने, ‘यसअघि ल्यावको कर्मचारीले नभ्याएको समयमा एम्बुलेन्स चालकले स्वाब संकलनमा सहयोग गरेका थिए। कुनै बिरामी रेफर हुँदा बाटोमा के–कस्तो गर्ने, सलाइन चढाउनेलगायतका विषयमा पनि उनीहरुलाई तालिम दिइएको छ।’
आइतबार नगरपालिकाको ८ नम्बर वडामा रहेको आइसोलेसन सेन्टरबाट संकलन गरिएको स्वाब भने एम्बुलेन्स चालकले नभई स्वास्थ्य प्रयोगशालाका स्वाथ्यकर्मीहरुले संकलन गरेको उनले दाबी गरे।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेल भने एम्बुलेन्स चालकद्वारा स्वाब संकलन गरिनु गैरजिम्मेवारी भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘कोरोना महामारीको समयमा यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हुनु नैतिकताले दिँदैन। स्वाव संकलनका लागि ल्याबमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीकै आवश्यकता पर्छ।’
एम्बुलेन्स चालकद्वारा स्वाव संकलन गरिएकोवारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै उनले यस विषयमा सम्वन्धित कार्यालयप्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताए। नगरपालिकाको ८ नम्बर वडामा रहेको उक्त आइसोलेसन सेन्टरमा अहिले १९ जना कोरोना संक्रमणका सक्रिय बिरामी छन्।